ပညာရေးသမိုင်းတစ်လျှောက် အလုပ်ဖြုတ်ခံရသည့်ဆရာမက ဝန်ကြီးဌာနအားပထမဆုံးအဖြစ် တရားစွဲဆိုမှု စတင်ဖြေရှင်းချက်ပေးပြီ
3/29/2014 02:42:00 PM political-news
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ရုံးတွင် ထိပ်တိုက်စတင်တွေ့နေပြီဖြစ်သော ဝန်ထမ်းရာထူးဖြုတ်ခံလိုက်ရခြင်းအား မကျေနပ်၍ တိုင်ကြားမှုကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန က ဖြေရှင်းချက် စတင်ပေးလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးဘာသာဌာနမှူး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်ကျင်ဌေးအား မယူမနေရပင်စင်ပေးလိုက်သည့်အတွက် ဒေါက်တာဒေါ်ကျင်ဌေးက တရားလို ပြုကာ တရားသူကြီးချုပ်ရုံးသို့ တိုင်တန်း လိုက်သောအမှုကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနဘက်က စတင်ဖြေရှင်းခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းမှုကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာလှတင့်က တရားသူကြီးချုပ်ရုံးတွင် ပထမဦးဆုံးအ ကြိမ်လာ ရှင်းခြ င်းဖြစ်သည်။ အမှုဖွင့်ထားသူ တရားလိုဒေါက် တာဒေါ် ကျင်ဌေးက”ဒေါက်တာလှတင့် ရဲ့ဖြေရှင်းချက်စာရွက်ကို ကျွန်မထံပေးပို့ ထားပါတယ်။ ကျွန်မဘက်က လည်း ပြန် လည်ဖြေရှင်းဦးမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
အပြစ်ရှိ၊ မရှိကို တရားသူကြီးချုပ်ရုံးက မဆုံးဖြတ်ရသေး၍ ဆုံးဖြတ်နိုင် ရန် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထွက်ဆိုမှုကို တစ်ကြိမ်စီ ပြုလုပ်မှုပြုပြီးကြပြီဟု တရားလို ရှေ့နေဦးေ မာင်မောင်စိုးထံမှ သိရသည်။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမအသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းထိုက်အောင်က
”မျှတတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်ဖို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ လိုလားတယ်။ မှန်၊ မမှန်ကိုတော့ ရုံးတော်ကသာ ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ ကြိုပြီးမှတ်ချက်မပြုလိုပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ပညာရေးသမိုင်း တစ်လျှောက်အလုပ်ဖြုတ်ခံရခြင်းအပေါ် မကျေနပ်၍ဝန်ကြီးဌာနကို တရားစွဲဆိုမှုမှာ ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည့် အပြင် နိုင်ငံ၏ တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံကြမှုမှာ လည်း ပထမဦးဆုံးပင် ဖြစ်သည်။
3/29/2014 02:37:00 PM tips
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အရှုံးပေါ်နေသည့် အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များ စိတ်ဝင်စား
3/29/2014 02:25:00 PM Myanmar-news
လက်ရှိအရှုံးပေါ်နေသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်းနှင့် သိမ်းဆည်းပြီးသည့် အမှိုက်များကို နောက်ဆုံး စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံသို့ သယ်ယူစွန့်ပစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းရန်တင်ဒါများ ခေါ်ယူထားရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင် အများအပြား စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးခင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
တင်ဒါစတင်ခေါ်ယူချိန်တွင် လာရောက်ဆက်သွယ် လျှောက်ထားရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်းကို အတိအကျ မပြောနိုင်သေးသော်လည်း ကုမ္ပဏီအများအပြား စိတ်ဝင်စားနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းသို့တင်ဒါ ခေါ်ယူထားရာတွင် လုပ်ကိုင်လိုသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် Proposal တင်ပြရာတွင် အများပြည်သူထံမှ မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့် အမှိုက်သိမ်းဆည်းခ ပြန်လည်ကောက်ခံမည် ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်းတင်ပြ ရမည်ဖြစ်ပြီး နှုန်းထားအပေါ်၌မူတည်၍ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ တင်ပြလာရင် သူတို့ဘယ်နှုန်းထား အမှိုက်သိမ်းဆည်းခ ကောက်မလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းတင်ပြရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စည်ပင်သာယာအနေနဲ့ အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်းက အရှုံးခံစိုက်ထုတ် လုပ်နေရတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့လုပ်နိုင်လား မလုပ်နိုင်သလား စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နှုန်းနဲ့ ကောက်မှာလဲ။ ဌာနဘက်က ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဖြစ်လို့ တိုးတက်ဖို့၊ နှုန်းထားတွေအပေါ် မူတည်ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးခင်ဝင်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ လုပ်ကိုင်နေသော အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်းမှာ အရှုံးပေါ်နေသည်ဟုပြီး အမှိုက်သိမ်း လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရငွေမှာ ပြန်ရငွေထက် သုံးဆကျော် ပိုမိုများပြားကြောင်း သိရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းမည်ဆိုပါက ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့်လည်း အရှုံးခံနိုင်မည် မဟုတ်ရာ လက်ရှိအမှိုက်သိမ်းဆည်းခ နှုန်းထားထက် ပိုမိုကောက်ခံပါက အများပြည်သူ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုလည်း သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
သို့သော် တစ်ဖက်တွင်လည်း အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသော ယခုထက်ပိုမို သပ်ရပ်ကောင်းမွန်သော အမှိုက်သိမ်းစနစ် ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟုလည်း သုံးသပ်နေကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် တစ်နေ့အမှိုက်တန် ၁၆၀၀ နီးပါး ထွက်ရှိပြိး ယင်းတို့ကို မြို့နယ်ရပ်ကွက်များ အတွင်းရှိ အမှိုက်ကန်၊ အမှိုက်ပုံးများမှတစ်ဆင့် အမှိုက်ကားများဖြင့် သယ်ယူ၍ နောက်ဆုံးစွန့်ပစ် အမှိုက်ပုံဖြစ်သော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ထိန်ပင်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတို့တွင် သွားရောက် စွန့်ပစ်သည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ် အမှိုက်သိမ်းဆည်းမှု စနစ်တွင် အသုံးပြုနေရသည့် ကားများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ အခြေအနေအရ ဟောင်းနွမ်းသည့် ရန်ကုန်မြို့တော် အင်္ဂါရပ်နှင့် မညီညွတ်တော့သည့် အမှိုက်သိမ်း ကားများကိုလည်း ထည့်သွင်း အသုံးပြုနေရသည်ဟု သိရသည်။
3/29/2014 02:18:00 PM Myanmar-news
ဓာတ်မြေသြဇာဖိုး ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၆၀၀ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ မကွေးတိုင်း မင်းဘူးခရိုင် တရားရုံးကနေ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးလှဌေးကို တသက်တကျွန်း ထောင်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ အစိုးရ သတင်းစဉ် ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်အပြီးမှာ အများပြည်သူပိုင် ငွေကြေး အလွဲသုံးမှုနဲ့ မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၁ ယောက်ကို ခုလို အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တဲ့ သတင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထွက်ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
3/29/2014 02:13:00 PM articles
အခုကျတော့ အမေစု ကဘာမှမလုပ်နိုင်မှန်း သိသွားပြီတဲ.. သူက..ကုလားတွေဘက်ကလိုက်တယ်.လို့ကြားတယ်..တဲ့ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ…..တဲ့..
ညီမလေးကို..ကျွန်တော် ဒီပိုစ့်ထဲကနေပဲ.. စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေကြားပေးလိုက်ပါ့မယ်….၊
ဒီမေးခွန်းကြောင့်……ကျွန်တော် သဘောပေါက်မိတာက. သာမန် ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားတဲ့သူအချို့ဟာ..မီဒီယာအချို့နဲ့ Social မီဒီယာတွေကတက်လာတဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုတွေနောက်ကို မျောပါနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာပါတယ်၊
၀ါဒဖြန့်သူတွေနဲ့အာဏာရှင်တွေဟာ… လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ထင်ရှားမှုနဲ့ လူအများက
“လူ့အခွင့်အရေး Vs ဘာသာရေး “စစ်မျက်နှာကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်…
ဘာသာရေးမုန်းတီးဓာတ်ခံရှိသူတွေပေါများလာရာမှ.. အဲဒီသူတွေထဲကို..စနစ်ကျနတဲ့ စကားတွေပဲပြောတတ်တဲ့.. ဒေါ်စုပါတီရဲ့…အာဘော်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပြီး လူတွေရဲ့မျှားဦးကို ဒေါ်စုဘက် လှည့်စေခဲ့ပါတယ်..
အစိုးရကပေးတဲ့ …အိမ်တစ်လုံးကားတစ်စီးတောင်မရှိလို့ နေပြည်တော်မှာ အိမ်ငှားနေရတာပဲကြည့်ပါလေ..
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအဆင့်တောင် အစိုးရဆီကရတဲ့ သင့်တော်တဲ့အဆောင်အယောင် ရှိပါသေးတယ်…
“တိုင်းပြည်ကိုမလွဲမရှောင်သာအုပ်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်”…ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွင်တွင်သုံးပြီး..နှစ် ၃၀ လောက် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လို့ အကုန်ရောင်းစားသွားတဲ့ သူမျိုးတွေကို ကြိတ်လေးစားနေတဲ့ အတန်းအစားတွေသာ…ဒေါ်စုရဲ့ပွင့်လင်းမှုကို ဝေဘန်ကြတာပါ..၊
အဲဒီတော့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုသာ… ယူထားတဲ့ရာထူးတွေ..ယူထားတဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ တန်အောင် လုပ်ရမဲ့သူတွေမလုပ်သေးတာကို..အရင်ထောက်ပြသင့်ပါတယ်။
အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ …ဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ပါတယ်… မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ပွဲလယ်တင့်ပါတယ်..
အဲဒီလိုသွားတဲ့နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်တိုင်းမှာ.. နိုင်ငံတကာက သွားဖိတ်ကြားစီစဉ်လို့သွားရတာချည်းပါပဲ.. အစိုးရစရိတ်နဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ဖြုန်းနေတယ်ထင်ပါသလား…၊
လွှတ်တော်ထဲမှာတောင် ၀ှိုက်ကဒ်ကိစ္စ အရေးယူဖို့စတဲ့အဆိုတွေတောင် ၀ိုင်းကန့်ကွက်ခံရတာ… တစ်ယောက်ကိုတစ်မဲသာပေးခွင့်ရှိတဲ့ဒေါ်စုပါတီရဲ့ အင်အားအနည်းငယ်က သူနိုင်စွမ်းရှိတာလေးတွေကိုပဲလုပ်လို့ရနိုင်မှာဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်..
အာဏာရှင်တွေဟာ…ဒေါ်စုကို သမ္မတဖြစ်စေချင်ဖို့နေနေသာသာ.. ၀န်ကြီးအဆင့်တောင်ဖြစ်စေချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်.. ထက်မြက်တဲ့ဒေါ်စုသာဝန်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်..၊ အတွင်းစည်းထဲရောက်သလိုဖြစ်ပြီး…
၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ ကြိတ်ရှင်းနေရတဲ့အာဏာရှင်ရဲ့အရှုပ်ထုတ်တွေကို မြေလှန်မှာကို အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့နေကြမှာပါ…
ကြေးနီတောင်တွေသယံဇာတသိုက်တွေ၊ရတနာသိုက်တူးတာတွေကိစ္စ.. ဒေါ်စုသာ… သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဖြစ်ရင်..ဘယ်လိုမြေလှန်မလဲ..
ဒေါ်စုပြောပြောနေတဲ့..တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစတဲ့ ပေတံတွေနဲ့တိုင်းတာနဲ့ကို…အကုန်..ခါဆင်းသွားမှာပါ..၊
အဲဒီလိုအနေအထားတွေကို.. ဘယ်သူကမတွေးပဲ…မကြောက်ပဲနေမှာလဲဗျာ..၊ တွေးလေ ကြောက်လေ..တွေးလေ လန့်လေပေါ့…
အဲဒီတော့ ဒေါ်စုဟာ..ဘယ်လောက်တော်တော်.. အာဏာရှင်တွေဟာ…ဒေါ်စုကို…
သမ္မတလို နိုင်ငံ့ဦးသျှောင်အဖြစ်ထားဖို့နေနေသာသာ.. ဘယ်သူက…၀န်ကြီးအဆင့်တောင်ဖြစ်စေချင်မှာလဲနော်..
မြန်မာပြည်ရဲ့သယံဇာတကိုလဲ အလကားနီးပါးရသေးတယ်.. မြန်မာပြည်မြေကိုနင်းပြီး…ဒေသတွင်းမှာ သူ့သြဇာချဲ့ထွင်လို့လဲ ရသေးတယ်ဆိုတာ..ဘယ်လောက်တောင်.ရခဲ့တဲ့အခွင့်ရေးပါလဲ..၊
ကိုယ့်ခြံထဲက ရွေအိုးတွေကိုလဲ တူးသွားသေးတယ်..၊ ကိုယ့်ကိုလဲ…မုန့်ပဲသားရေစာလောက်ပဲပေးသေးတယ်..
ကိုယ့်အိမ်ဦးခန်းမှာလဲ..ထိုင်သေးတယ်.. ကိုယ့်ခြံကိုခြေကုတ်ယူပြီး..ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲရန်ရှာလို့ရတယ်.. ဆိုတော့ကာ…မြန်မာပြည်ဟာ..တရုတ်ရဲ့ အလကားရတဲ့ အဖိုးတန်ဆုတစ်ဆုပါပဲ..၊
မြန်မာအစိုးရက…ညံ့ဖျင်းစွာနဲ့..သာမန်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုလို့ပဲမြင်ပေခဲ့မဲ့.. တရုတ်တွေရဲ့.စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက် ဖြစ်တဲ့….အနာဂတ်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို..ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့. ရခိုင်ပြည်နယ်..၊ ကျောက်ဖြူဒေသကြီးကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ.. အဲဒီ စိတ်ကူးယာဉ်အိပ်မက်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်. ကာကွယ်ဖို့လိုလာပါတယ်…
အဲဒီအတွက်..ရခိုင်ဒေသနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ.. တရုတ်ရဲ့..စိတ်ကူးယာဉ်အိပ်မက်တွေကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့.. ထက်မြက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့…ဒေါ်စုကို…လက်မခံပဲ မုန်းတီးနေမှ.. ဖြစ်မှာပါ…၊
အနေအထားတွေက နိုင်ငံရေးတွေမဟာဗျူဟာတွေ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေ အများကြီးပါနေပါတယ်…၊
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်…(၁၀)နှစ်လောက် သေကောင်ပေါင်းလဲ လုပ်ရင်ကို..
အဲဒီအနေအထား..အဆင့်အတန်းကို… သူမ အကျယ်ချုပ်ကလွှတ်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာ..
ပညာနဲ့ဆင်မြင်မှုရှိပါတယ်…၊ မျက်တောင်တဆုံးမက ကြည့်တတ်ပါတယ်။
3/29/2014 02:01:00 PM health-news
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ထားသည့် သွေးတိုးရောဂါ အတွက် အစွမ်းထက်သော ဆေးဖက်ဝင်အပင် များနှင့် သောက်သုံးရမည့် ဆေးညွှန်း ပမာဏများကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါသည် အသံတိတ်လူသတ်သမား (silent killer) ဟုဆို ရလောက်အောင် ကျန်းမာရေး အတွက် အသက် အန္တရာယ်ပေးနိုင် သည့် ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သွေးတိုးကြောင့် လေဖြတ်လေ ငန်းနှင့် နှလုံးရောဂါ အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် အထူး ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သွေးတိုး ကျစေရန်နှင့် ပုံမှန်သွေးဖိ အား ရရှိစေရန် ဖော်ပြမည့်ဆေးပင်များ အနက် မိမိတို့လက်လှမ်းမီရာ တစ်မျိုး မျိုးကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
သွေးတိုးကျစေရန် အလိုကျူ အမြစ် ၃ ကျပ်သားကို ရေသန့် ၂ ဖန်ခွက် ထည့်ပြုတ်ကာ တစ်ဖန်ခွက် ကျန်လျှင် တစ်ကြိမ်လျှင် ဖန်ခွက် တစ်ဝက်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ရပါမည်။
သွေးတိုး ကျစေရန် တစ်ကြိမ်လျှင် သံပရာသီး တစ်ခြမ်းကို ရေနွေး ပူပူ တွင်ထည့်ကာ တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သံပရာရေ ချဉ် ချဉ် သောက်ပေးနိုင်ပါသည်။
သွေးတိုးကျစေရန် ကြက်သွန်ဖြူဥကို ပါးပါးလှီး၍ သံပရာရည်ဆမ်း ကာ ထမင်းစားတိုင်း စားသုံးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဆူးပန်းရွက်အရည် သို့မဟုတ် ဆူးပန်းဝတ်ဆံမှုန့် တစ်ခါသောက် ၁ ဂရမ် ကို ရေနွေးဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သွေးတိုးကျစေရန် ဆင်တုံးမနွယ်ပင်စည် လက်နှစ်ဆစ်ခန့် အပိုင်း ကလေး ၅ ပိုင်းကို ထုထောင်းလျက် ရေသန့် ငါးလီတာဘူးတွင် ထည့်စိမ် ကာ တစ်ကြိမ်လျှင် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်တစ်ဝက်၊ တစ်နေ့ သုံးကြိမ် သောက်သုံးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဒန့်သလွန်အရွက် သတ္တုရည် တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ဇွန်း ရေနွေးဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရပါမည်။
ဆူးကောက်နက်အမှုန့် တစ်ကြိမ်လျှင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ် ဝက် ရေနွေးဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရပါမည်။
နံ့သာနီမှုန့် တစ်ကြိမ်လျှင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ရေနွေးဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရပါမည်။
၄င်းအရွက်သတ္တုရည် တစ်ကြိမ်လျှင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း ရေနွေးဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရပါမည်။
၄င်းအပင်အမှုန့် တစ်ကြိမ်လျှင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ရေနွေး ဖြင့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ရပါမည်။
စားဖွယ်စုံဆိုင်အား မလိုလားသူမှ မီးရှို့ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိ
3/29/2014 02:01:00 PM crime-news
၂၈.၃.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၃၁၅အချိန်တွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊(၉)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် လမ်း(၄၀)ထိပ်ရှိ ဦးကျော်ဝင်း၏ ရွှေလင်ပန်း စားဖွယ်စုံ
ဆိုင် မီးဖိုချောင်ဘေးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနီးရှိလူများမှ ၀ိုင်းဝန်း
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းမှူးနှင့်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်မီးသတ်
ဦးစီးမှူးနှင့်အဖွဲ့တို့မှ ရောက်ရှိစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဆိုင်၏မီးဖိုချောင်အုတ်နံရံအပြင်
ဘက်နှင့် ခြံစည်းအုတ်နံရံတို့ကြား၌ မီးလောင် ကျွမ်းထားသည့် ဓါတ်ဆီနံ့
ရသော ပလပ်စတစ်ပုံးအပိုင်းအစနှင့် မီးဖိုချောင်အနီး ခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက် အုတ်နံရံနှင့်ပုလင်းခွံအိတ်များကြားတွင် ဓါတ်ဆီ(၂)ဂါလန်ပါ အဖြူရောင် ပလပ်စတစ်ပုံး(၁)ပုံးတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
ယင်းသို့တွေ့ရှိချက်များအရ စားဖွယ်စုံလုပ်ငန်းအား မလိုလားသူတစ်ဦး
တစ်ယောက်မှ လာရောက် စီစဉ်ပြီး မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိ
သဖြင့် ဦးကျော်ဝင်းမှ စုံစမ်းအရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်အရ
ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၂၈/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၄၃၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။